Previous Article NCTUA Enwee Ọgbakọ n'Awka, Kpọọ Òku Maka Njikọ Aka Gọọmenti Steeti Na Gọọmenti Etiti
Next Article A Dụọ Ụmụ Nwaanyị Ka Ha Tinye Aka n'Imegide Otu Nzuzo Na Ọgwụ Ike
Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra nọrọ n'isi ngwụcha izuụka gara aga wee nabata ma binye aka n'akwụkwọ amụmà ego ọrụ steeti ahụ nke ahọ 2020, mee ya ka ọ bụrụ amụma iwu.
Ya bụ amụma ego ọrụ nke isi mkpu ego ya dị otu narị ijeri naịra na iri atọ na asaa, na ụma otu nde naịra (N137.1b) ka e kwùrù na a ga-amàlite itinye ya n'ọrụ bido n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị ahọ na-abịa abịa.
Onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwado 'Awka South' nke mbụ n'ụlọ omebe iwu ahụ, ma bụrụkwa onye ndu ndị kacha n'ọnụ ọgụgụ, bụ Maazị Nnamdị Okafor ka e kwùrù na ọ bụ ya kwulitere maka ịkwàdo ya bụ ego ọrụ, ebe ògbò ya nke na-anọchite anya Anaọcha nke mbụ, bụ Maazị Ebere Ejiọfọr kwàdoro ya bụ nzọpụ ụkwụ, tupuu ndị omebe iwu ahụ wee sizie na ntụli-olu wee nabata ya n'izugbe.
N'okwu ya bànyere nke ahụ, Okwupụta okwu ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ, bụ Maazị Uchenna Okafor kèlèrè ndị òtù ọrụ dị iche iche n'ụlọ omebe iwu ahụ maka ezi agbambọ ha n'inyòchà ya bụ amụma ego ọrụ nke ọma nà n'oge, dịka e siri tụọ anya; ma kelekwazie onye nọ n'isi òtù ọrụ na-ahụ maka amụmà ego ọrụ, bụ Maazị Obinna Emenaka.
O mere ka a mara na nnabàta na nkwàdo amụmà ego ọrụ ahụ ngwangwa, bụ nke e mere n'oge dabàrà adabà na mkpebi ụlọ omebe iwu steeti ahụ imepụta na ịkwàdo amụma iwu ga-enye aka n'ịkwàlite ezi ọnọdụ obibi ndụ ụmụafọ Anambra, ma kwàlitekwa ezi ọnọdụ mmepe bụ ịgbà na steeti ahụ, dịka ọ bụ ihe na-echukwa ọchịchị Gọvanọ Willie Obianọ ụra. Ọ gakwazịrị n'ihu kwuo na ya bụ amụma ego ọrụ zuru òkè, ma nweekwa ihe a chọrọ iji kwàlite mmepe, ezi ọrụ nakwa ezi ọchịchị na steeti ahụ n'ime ahọ na-abịa abịa.
Na ntụnye nke ya, nwa amadi ahụ onye nọ n'isi òtù ọrụ na-ahụ maka amụmà ego ọrụ, bụ Maazị Obinna Emenaka, bụ onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo 'Anambra East' mere ka a mara na ha hàzigharịrị ya bụ amụma ego ọrụ site n'igbuchàpụsị ụfọdụ ihe n'ego a mapụtaara ụfọdụ ụlọ ọrụ nakwa ịtụkwàsàkwu ego na nke a mapụtara maka ụfọdụ ngalaba dị iche iche dị oke mkpa.
Ọ dị ncheta na ọ bụ n'abalị iri abụọ na isii nke ọnwa September ka aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ zigaara ndị omebe iwu steeti ahụ ya bụ amụma ego ọrụ n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'Awka, bụzị nke mere ka ọ bụrụ Gọvanọ mbụ n'ala Nigeria gbaa gburugburu zigaara ndị omebe iwu amụma ego ọrụ nke ahọ 2020.
Site n'aka ahụ ebinyere na ya bụ amụma ego ọrụ ugbu a, ndị omebe iwu steeti Anambra abụrụkwala ndị ụlọ omebe iwu mbụ n'ala Nigeria kwadoro amụma ego ọrụ nke ahọ na-abịa abịa.
A na-atụzị anya na Gọvanọ Obianọ ga-ebinyezị aka na ya bụ akwụkwọ ego ọrụ, dịka ndị omebe iwu ahụ siri zighachiri ya na nso-nso a.